ကျောက်စိမ်းအကြောင်းနဲနဲလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျောက်စိမ်းအကြောင်းနဲနဲလေး
Posted by မောင် ပေ on Sep 4, 2011 in Creative Writing, How To.. | 10 comments
(အမှာစာ ။ ။ ကျောက်စိမ်းအကြောင်းနဲနဲလေး ဆိုပြီး ရေးခဲ့တာ ၊ အခု ပို့ စ် ဟာ နံပါတ် ၅ ပါ ။ သို့ သော် ပို့ စ်ခေါင်းစဉ် မှာ နံပါတ် မတပ်တော့ပါဘူး ။
“ မင်း က ကျောက်စိမ်းအကြောင်း ရေးရအောင် ၊ မင်း က ဘယ်လောက် ကျွမ်းလို့ လဲ ”လို့မေးလာခဲ့ရင် …
ကျွန်တော် က ပရော်ဖက်ရှင် နယ် ကြီး မဟုတ်ပါ ခင်ဗျား ။
“ ဒါဆို မင်း ဘာလို့ ရေးလဲ ” လို့ မေးရင်….
ကျွန်တော် က အခု မှ ကျောက်စိမ်း အရောင်းအဝယ် စလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူ တစ်ဦး ပါ ။ ပညာ သင်နေသူ တစ်ဦးပါ ။
ကျွန်တော် သိခဲ့ ၊ တက်ခဲ့ တဲ့ ပညာလေး တွေ ကို ဒီဂေဇက် မှာ ပြန်လာ ဝေမျှ ပေးနေတာပါ ။
ကျွန်တော့် ကို သင်ပေးတဲ့ ကျွန်တော့် ဆရာ ကို ဒီကျောက်စိမ်း ပို့ စ် တွေ နဲ့ ပူဇော်ပါတယ် ။
ထပ်လောင်း ပြောချင် တာ တစ်ခု ရှိပါတယ် ။
ကျောက်စိမ်းအရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေ ၊ ကျွန်တော့် ပို့ စ် ကို ဖတ်မိမယ် ဆိုရင် ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကို မူကြို စာ ပြ နေသလို ဖြစ်နေမှာပါ ။
ဒီအတွက် ၊ ဒီနေရာ က နေ ၊ အားနာပါကြောင်း ပြောပါရစေ ။
ကျွန်တော့် ကျောက်စိမ်း ပို့ စ်တွေ ကို ဖတ်ပြီး ရင် ၊စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့အနည်းဆုံး ၊ အယုတ်စွ ဆုံး ၊ ကျောက်စိမ်းအကြောင်း နဲနဲ လောက်တော့ ပြောနိုင်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
ကဲဗျာ…အမှာစာ က လည်း ပေရှည်နေပါပြီ ၊ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး ခင်ဗျာ ။ )
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ပိုရီယမ် ပွဲ မှာ နိုင်ငံခြားသား တွေ ကျောက်လာဝယ် ရင် ၊ ချဲဆီး ဖီလ်တာ ( chelsea filter ) လို့ ခေါ်တဲ့ ကျောက်တုကျောက်စစ် ၊ ဆေးဆိုးထားခြင်း ရှိမရှိကို ကြည့်တဲ့ ကိရိယာ လေး ရယ် ၊ ကျောက်ကြည့် မှန်ဘီလူး ( အဆ ၃၀ ) ရယ် ၊ ကျောက်ကြည့် ဓါတ်မီး ရယ် ယူလာကြပါတယ် ၊ လာသမျှ နိုင်ငံခြား ကုန်သည် တိုင်း မှာ ပါရှိကြပါတယ် ။
အပေါ်က ပုံ ၂ ပုံ က တော့ chelsea filter လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ အမဲစက်ဝိုင်း လေး ကို တွေ့ ကြ မှာပါ ။ အဲဒီ အမဲရောင် စက်ဝိုင်းလေး ကို မျက်လုံး နား ၁ လက်မ လောက် ခွါ ပြီး ကျောက်ကို ကြည့်တာပါ ။ အပွင့် ၊ လက်ကောက် ၊ လွှာချပ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ ။ နေ့ ချိန်မှာ အပြင်ဘက် ဆိုရင်တော့ မီးထိုးစရာ မလိုဘူးပေါ့ ၊ နေရောင် အောက် မှာ ကျောက်ကို ထားပြီး ၊ ဒီ ကိရိယာ နဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် ဆေးဆိုးထား လား ၊ အစစ်လား တန်းသိ နိုင်ပါတယ် ။ ဆေးဆိုးထားတဲ့ ကျောက်စိမ်း ကို ဒီကိရိယာ နဲ့ ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ၊ ဆေးဆိုးထားတဲ့ ကျောက် ဟာ ပန်းရောင် သို့ မဟုတ် အနီရောင် အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားတာကို တန်းမြင် ရပါတယ် ။ ချဲဆီး ဖီလ်တာ လို့ ခေါ်ရခြင်း အကြောင်းဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ချဲဆီးမြို့ က ထုတ်လုပ် လို့ ပါတဲ့ ။
တန်ဘိုး ရှိပါတယ် ။ ကျောက်စိမ်း ကို ဆေးဆိုးထားသလား ဆိုတာ ကို ဒီ ကိရိယာ လေး အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် တန်းသိနိုင်တာမို့ ပါ ။
သူ့ တန်ဘိုး က တော့ ၂၅၀၀၀ ကျပ် ပါ ။ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ များ ဆောင်ထားသင့်တယ် လို့အကြံ ပြု ပါရစေ နော် ။
နိုင်ငံခြားသားတွေ ကျောက်လာဝယ် ရင် ၊ မရှိမဖြစ် ဆောင်လာတတ်တဲ့ ပစ္စည်း ပေါ့ ။
ကျွန်တော် တို့ မန်းတလေး က ကျောက်ဝိုင်း ထဲ က လူတွေ က တော့ မဆောင် ကြပါဘူး ၊ ကျွန်တော် ဒီကိရိယာ ကို ပြပြီး
“ ဒါဘာလဲ ၊ သိသလား ” လို့ သွားမေးကြည့်တယ် ။ ၁၀ ယောက် မှာ ၉ ယောက် က မသိပါဘူး တဲ့ ၊ ကျန်တစ်ယောက် က တော့ မြင်ဖူးသလိုလို ပဲ တဲ့ ။ အင်ပိုရီယမ် မှာ မြင်ဖူးတယ် တဲ့ ။
ကျောက်ဝိုင်း မှာ မကြာခဏ ၊ ဆေးဆိုးကျောက် လိမ်ရောင်းတယ် ဘာညာ ၊ ပြဿနာ တွေ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ် ။
ကျွန်တော် အခု ပြောတဲ့ ကိရိယာလေး ကို ဆောင်ထားကြမယ် ဆိုရင်တော့ ၊ ဆေးဆိုးကျောက် ၊ ကျောက်တု ပြဿနာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး ။
ဆေးဆိုးကျောက် ဆိုတာ သာမန် မျက်လုံး နဲ့ ကြည့်လို့ ၊ မကွဲခြားနိုင်ပါဘူး ။
ချွင်းချက် အနေ နဲ့ ….ပူတာအို ကျောက် နဲ့ ခန္တီးကျောက် တို့ ကို ၊ ဒီချဲဆီ ဖီလ်တာ နဲ့ ကြည့်ရင် လည်း ပန်းရောင် ၊အနီရောင် ပြောင်းပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ပူတာအိုကျောက် နဲ့ ခန္တီးကျောက် တို့ က လည်း ကျောက်စိမ်းတွေ ပါပဲ ။ အဖိုးမတန်ဘူးပေါ့ ဗျာ ။
အဲဒီ ပူတာအို နဲ့ ခန္တီးကျောက် တို့ က တော့ အပွင့်သေးပါတယ် ။ အနာများ ပါမယ် ။ အရည်လှတယ် ၊ အမဲစက်လေး တွေ ပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် တော့ ပူတာအို နဲ့ ခန္တီးကျောက် တစ်ခုခု ပေါ့ ။ ချဲဆီးဖီလ်တာ နဲ့ ကြည့်ရင် အနီရောင် ပြောင်းမယ် ၊ ပန်းရောင် ပြောင်းပါမယ် ။
ဆေးဆိုးထားတဲ့ကျောက် ကတော့ အနာမပါ ပါဘူး ။ အသားကောင်းပါတယ် ။
ဒါဆို ရင် ချဲဆီး ဖီလ်တာ အကြောင်း သိကြပြီ လို့ ထင်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ကျောက်ကြည်ဓါတ်မီး ပုံ ပါ ။
အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း မရတဲ့ နေရာ မျိုး ၊ ညမှာ ကျောက်ကြည့်မယ် ဆိုရင် လိုအပ်ပါတယ် ။ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ပါ ။
ပုံထဲက ဓါတ်မီး က ၄၈၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ် ။ ဒီထက် တန်ဘိုး ပိုကြီး တဲ့ ဓါတ်မီးတွေ လည်း ရှိပါသေးတယ် ။
အခု မှ စလုပ်မယ့် လူတွေ အဖို့ တော့ ၊ ဒီလောက် ဆိုရင် ကောင်းကောင်းကြီး သုံးလို့ ရပါပြီ ။
ကဲဗျာ ဒီဓါတ်မီး ကို အသုံးပြု ပြီး ကြည့်ရင် မြင်တွေ့ နိုင်တဲ့ ၊ အပြစ်အနာတွေ အကြောင်း ကို ပြောပြ ချင်ပါတယ် ။
ရှင်းမဲ ၊ ရှင်းနက် = ကျောက်စိမ်း ရဲ့ အခွံ ပေါ် မှာ ပါတဲ့ အမဲစက်လေး တွေ ကို ခေါ်တာပါ ။ ကျောက်ခွံ ပေါ် မှာပါတဲ့ အမဲစက်များ အတိုင်း ၊ အထဲက ကျောက်သားအတွင်းမှာလဲ ရှိတတ်ပါတယ် ။ ဒီအမဲစက်လေး တွေ ဟာ ဖျက်အားကောင်းပါတယ် ။ ဒီအမဲစက်တွေ ပါနေတဲ့ ကျောက်ဆိုရင် ဈေးလျှော့ပေး ၊ ဈေးနှိမ်ဝယ် ၊ ဈေးပေးမများသင့်ပါ ။
ရှင်းစိမ်း = သူကလဲ အမဲစက်တွေ ပါပဲ ၊ အောက်မှာ ချပြီး ကြည့်ရင် မဲနေ ပါတယ် ၊ နေရောင်နဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် စိမ်းနေပါတယ် ။ သိပ်မဆိုးတဲ့ အနာမျိုး ပါ ။
စိုက်ရှင်း = အခွံပေါ်မှ ရှင်းမဲ ဟာ ကျောင်သားအတွင်း ကို စိုက်ဝင်နေတာမျိုးပါ ၊ ဖျက်အား ကောင်းပါတယ် ။
ကပ်ရှင်း = ကျောက်စိမ်းတုံး ရဲ့ အခွံ ပေါ်မှာ ပဲ ရှိပါတယ် ။ အတွင်းထဲ သို့ မဝင်ပါ ။ သိပ် မစိုးရိမ်ရပါဘူး ။
အက်ကြောင်း = အခွံပေါ် မှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ကျောက်သား အတွင်းထဲ သို့ ပါ ဝင်ပါတယ် ။ ကျောက်ရဲ့ အရည် အသား ကို ဖျက်ပါတယ် ။
မြင်းမြီးရိုက် =မြေပုံ ပေါ်မှာ မြစ်ပုံ ချောင်းပုံ တွေ ဆွဲထားသလို ၊ ကျောက်ခွံ ပေါ်မှာ အစင်းရာ တွေ ရှုပ်ယှက် ခတ် နေတာပါ ။ ရှောင်သင့်ပါတယ် ။ ဝယ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဈေးနှိမ်ရမှာပေါ့ ဗျာ ။
ရှိုနာ = သဘာဝ အတိုင်း အက်ကွဲနေတဲ့ အနာကြီး ( ကြီးပါတယ် ) ပါ ၊ မစိုးရိမ်ရပါဘူး ။
ဖားမျက်ဆံ = ဖားမျက်ဆံ ကဲ့သို့ ၊ အလယ်မှာ အမဲစက် ဖြစ်နေပါတယ် ။ အရည် အသား ကို ဖျက်တတ်ပါတယ် ။
ရို့ နာ = ဖြတ်သား ပေါ်မှာ အပ်ချည်မျှင် အပိုင်းအစ လေး တွေ လို ဒဏ်ရာအနာ အသေးလေး တွေ ပါ ။ အရည်အသား ကောင်းပါတယ် ။ သွေးလျှင်တော့ အရောင် မတက်ပါဘူး ။ (ကာလာတင်ပေမယ့် ကာလာ မတက်တာပါ )
ဆန်ပြုတ် ၊ ဆန်နှစ် = ကျောက်စိမ်းဖြတ်သား ထဲ မှာ ဆန်ပြုတ်ဖတ် ၊ ဆန်နှစ်ဖတ် တွေ လို ဖြူဖြူ အပွင့်လေး တွေ ပါ ၊ အရည် နဲ့ အသား ကို ဖျက်ပါတယ် ။
ဖြုတ်ချေး = အခွံ နဲ့ အသား မှာ အမဲစက် သေးသေးလေးတွေ ၊ ထင်ထင်ရှားရှား ကို မြင်နေရတာပါ ။ အဖျက်ပါ ပဲ ။
မှည့် = အသားထဲ မှာ မှည့် လို အမဲစက်ကြီးတွေပါ ။ အရည်ရှိတဲ့ နေရာ မှာ မှည့်ပါရင် ၊ အရည် မပွင့်ပါဘူး ။
အသွေးအရောင် မညီခြင်း = ဖြတ်သား တွေ နဲ့ သွေးပြီး ကျောက်ပွင့် တွေ ကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်ရင် ၊ တစ်ပြင်လုံး စိမ်းနေတယ် လို့ ထင်ရပါတယ် ။ သေချာ ကြည့် ရင် အရောင်အသွေး ဟာ မညီဘဲ ၊ တစ်နေရာ မှာ အရောင်ဖျော့ မယ် ၊ ရင့်မယ် ၊ ကွက်မယ် ။ ဈေးပေးမများသင့်ပါဘူး ။
အသားကြောင်းထိုးခြင်း ဆိုတာ က တော့ ကျောက်သားထဲ မှာ အသားကြောင်းကြီး ထိုးနေရင် ကျောက် အရည် ကို ပျက်စီး စေပါတယ် ။ ကျောက်တန်ဘိုး ကျတတ်ပါတယ် ။
ကျောက်သား မညီတာ က တော့ ကမ္ဘာမြေကြီး ရဲ့ မတူညီ တဲ့ ဖိအားတွေ ကြောင့် ၊ ကျောက် ရဲ့ တစ်နေရာ နဲ့ တစ်နေရာ အသားမတူပါ ။ အရောင်တင် ရင် ၊ တစ်ဘက် မှာ အရောင်ကြည်နေပြီး တစ်ဘက် မှာ အရောင် ထိုင်းတတ်ပါတယ် ။
ကျောက်သွေးတဲ့ ပုံ ညံ့ရင် ၊ ပုံစံ မကျရင် ၊ အချိုးမကျ ရင် ကျောက်စိမ်းဟာ အရည်မလှ ဖြစ်ပြီး တန်ဘိုး ကျ ပါတယ် ။ အချိုးကျကျ ပုံစံ ကျကျ သွေးမှသာ ၊ ကျောက်စိမ်းဟာ အရည်ရွှမ်း စို ပြီး တန်ဘိုး တက်လာမှာပါ ။
အချောထည် ပြု လုပ်တဲ့ အခါ အရောင်တင် တဲ့ နေရာမှာ အဆင့်ဆင့် ရှိပါတယ် ။
ဥပမာ မှတ်ဝိုင်း နံပါတ်တွေ ၁၀၀၊၃၀၀၊၅၀၀၊၁၀၀၀၊၂၀၀၀၊၅၀၀၀ စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် အရောင် တင်ရပါတယ် ။
နောက်ဆုံး အဆင့်မှာ ဝါးဖတ်ဖြင့် အရောင်တင်ရပါတယ် ။
စနစ်တကျ အရောင်မတင် ခဲ့ ရင်တော့ အကောင်းဆုံး အရောင် ကို မရပါ ။
လိပ်ကျောက် အကြောင်း ကို ပြောပြ ချင်ပါတယ် ။
လိပ်ကျောက် ကို ကျောက်ကြည့်ဓါတ်မီး ဖြင့် ထိုးထားပုံလိပ်ကျောက် ကို ဖြတ်ထားပုံ
အထက်ပါ ပုံ၃ ပုံ က တော့ လိပ်ကျောက် (acate) ပုံတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
လိပ်ကျောက် ဟာ ခုမ့်နီ ၊ ခုမ့်ဝါ နဲ့ တော်တော်လေး ဆင်ပါတယ် ။
လိပ်ကျောက် နဲ့ ကျောက်စိမ်း နဲ့ ကွာခြားချက် က ၊ လိပ်ကျောက် မှာ ယမ်းလုံးဝ မပါပါ ။ ကျောက်စိမ်းမှာ ယမ်းပါပါတယ် ။
လိပ်ကျောက် ကို သလင်း နဲ့ ခြစ်ကြည့်ရင် အစင်းတွေ ထင်ပါတယ် ။ ကျောက်စိမ်း မှာ သလင်းနဲ့ ခြစ်ရင် အစင်းမထင်ပါဘူး ။
လိပ်ကျောက် က လည်းတန်ဘိုး တစ်ခု ရှိပါတယ် ။ ကြိုက်ရောင်း ကြိုက်ဝယ်ပါ ။
လိပ်ကျောက် ကို သွေးပြီး လက်စွပ် လုပ်ဝတ် တာ များပါတယ် ။
တရုတ်လူမျိုးတွေ က ဒီလိပ်ကျောက် ကို ကံကောင်းစေတယ် ဆိုပြီး သဘောကျ နှစ်သက်စွာ ဝယ်ယူ ကြပါတယ် ။
ပုပ္ပားဘက် က ထွက် ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ် ။
( မှတ်ချက် ။ ။ ယခု အချိန်မှာတော့ လိပ်ကျောက် ကို လုပ်စားသူ များနေပြီ ဖြစ်လို့ ဈေးကွက် မရှိတော့ပါဘူး ။ ကြိုက်ရောင်း ကြိုက်ဝယ် ပါ ။
black jade ကို မီးမထိုး ပဲ ရိုးရိုး မြင်ရပုံ
black jade ကို မီးထိုးကြည့်သောအခါ မြင်ရပုံ
အရင် ပို့ စ်တွေထဲ မှာ ဘလက်ဂျိတ် အကြောင်း ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် နဲနဲ ပြန်ရေးပြပါမယ် ။
ဘလက်ဂျိတ် ဆိုတာ ကျောက်စိမ်းပါပဲ ။
သူ့ ရဲ့ ခုမ့် က အမဲရောင် ရှိပြီး အရည်ကျွမ်းနေပါတယ် ။
ဘလက်ဂျိတ် ဟာ ရိုးရိုး ကြည့်ရင် အမဲရောင် ပဲ မြင်ရပြီး ၊ နေရောင် သို့ မဟုတ် မီးနဲ့ ထိုးကြည့် လိုက်ရင်တော့ အစိမ်းရောင် ပါ ။
ဘလက်ဂျိတ်ဟာ အသားကောင်းပါတယ် ။ တန်ဘိုး လည်း ရှိပါတယ် ။
ကျွန်တော် တို့ ကျောက်ဝိုင်း သွားလို့ ၊ ခုမ့်မည်း တွေ့ ပြီ ဆိုရင် ၊ ဈေးသင့်အောင် ညှိပြီး ရအောင် ဝယ်ပါ လို့ ဆုံးမစကားရှိပါတယ် ။
သွေးပြီး အရောင်တင်ပြီး ပြီ ဆိုရင် ၊ တန်ဘိုးအရမ်းရှိလို့ ပါ ။
ဘလက်ဂျိတ် ကို ဆွဲသီး ၊ လက်ကောက် ၊ နားကပ်ပွင့် စသည်ဖြင့် မျိုးစုံ သုံးပါတယ် ။
ကဲဗျာ ဒီပို့ စ် ကို Black Jade ပုံလေး တွေ နဲ့ နိဂုံး ချုပ်လိုက်ပါတယ်နော် ။ နောက်ထပ် အချိန်ကောင်းကောင်း ရမှ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် ။
မောင်ပေပါဆိုမှတော့ ပေရှည်တာ မစမ်းပါဘူးနော်။ ဆက်သာရှည်။ ဒါမှ အစုံအလင်သိမှတ်ရမှာ ရန်ကုန်မှ ကျောက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူနဲ့ချိတ်ပြီး လုပ်ကြည့်မလားလို့လေ အဟိ
ကိုပေါက်ဖော် ကို ဆုကတော့ ချီးမြှင့် ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီ
ကိုပေါက်ဖော် ရဲ့ လိပ်ခေါင်း ဝေဒနာ အမြစ်ပြတ်ဖို့ ပဲ လိုတော့တယ်
ပျောက်တာနဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ ထောက်ခံချက် နဲ့ တစ်ကွ
ကျွန်တော့် ဘီယာဝိုင်း လေး ကို လာ ချီးယား ပါနော်
ဦးလေပွကြီး(ခ)ကိုကိုပေ့ရေ များများလိုက်တာနော်. ကျောက်စိမ်းအကြောင်းနည်းနည်းလို့ဆိုပီးတော့။ဟိ ဟိ
ဟဲဟဲ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောက်စိမ်းဆိုရင် အစိမ်းရောင်ကျောက်လေးလို့ပဲသိတယ် ။ ခုတော့နည်းနည်းလေး သိလာပြီထင်တာပဲ ။ ကျေးဇူးပါ ။
ဒီပို့ စ် ရဲ့ ရှေ့ မှာ
ကျောက်စိမ်းအကြောင်းနဲနဲလေး ဆိုပြီး ပို့ စ်၎ခု ရှိပါသေးတယ်
နောက်ထပ် လည်း တင်ပေးပါဦးမယ်
မရဘူး အခုတင် တိုးလိုး တန်းလန်းမလုပ်နဲ. ကိုပေ ကိုးရီးယား သားလား
Phyo MS says:
ကျောက်စိမ်း လက်ကောက်တို့လည်ဆွဲအရုပ်တို့ကိုမှန်မျက်နှာပြင်လိုပြောင်နေအောင်ဘယ်လို Polish တင်ရလဲဗျာ။ တရုတ်လက်ရာကိုမှီချင်လို့ပါ။